Mwari haasi anonzi Allah | Apg29
Allah haazi Mwari weBhaibheri kunoratidzwa muna chedzidziso vaMuslim.
Vachirumbidza zvino kuti Allah ndiye mwari chete uye kuti haasi Mwari zvebhaibheri. Asi mushanduro Swedish panguva iri akavhiringika apo Allah anoshandura se "Mwari".
mubvunzo uyu, neniwo kupa mhinduro pfupi kuti mubvunzo peji yacho .
Iwe wakati muvhidhiyo kuti Allah uye wechiKristu Mwari vatatu mumwe ndiye Mwari mumwe chete. Sei kuva apo vose Islam uye chiKristu dzakavakirwa muchiJudha uye vaprofita vose vechiJudha vari Muslim Koran?
The Bible haana kunzi Mwari Allah. zita rake YHWH - Jehovha. Zita iri riri Jesu.
VaRoma 10: 9. Nokuti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa.
Dai Allah uye YHWH Mwari chete uko zvechokwadi Jesu akadana Allah.
Allah haazi Mwari weBhaibheri kunoratidzwa muna chedzidziso Muslim:
"Hakuna mumwe Mwari kunze Allah uye Muhammad ndiye nhume Allah ."
In Arabic ndiye "Mwari" uye "Allah". Saka mashoko akasiyana, izvo zvinoratidza kuti Mwari hazvirevi Mwari. Vachirumbidza zvino kuti Allah ndiye mwari chete uye kuti haasi Mwari zvebhaibheri. Asi mushanduro Swedish panguva iri akavhiringika apo Allah anoshandura se "Mwari". Pamwe nokuti isu kuMadokero achapiwa vakavhiringidzika kufunga kuti nyaya Mwari yechiKristu.
Asi "Allah" izita chairo kuti rinoreva "mwari mukuru" asi shoko hakufaniri kunzwisiswa kuti anoreva zvebhaibheri Mwari. Paiva 300 zvidhori Mecca. Ava, Allah mwari mukuru Muhammad ichisarudzwa uye akaita kuti mumwe Mwari.
Mwari ane mwanakomana
Mwari Bhaibheri ane mwanakomana, iyo inoti kanoverengeka zvose Yekare uye Testamende Itsva.
The Testament yekare
Shoko 30: 4th Ndiani akambokwira kudenga uuye pasi zvakare? Ndiani akambounganidza mhepo mumaoko ake? Ndiani akasungira mvura munguvo yake? Ndiani kusimbiswa yose wairambidza? Zita rake, uye chii chiri mwanakomana wake - uchiziva kosi?
Pana 11: 1st Isiraeri achiri mwana ndaimuda, uye muIjipiti ndakashevedza mwanakomana wangu.
2 Samueri 7: 14.Jag achava baba vake, uye mwanakomana wangu ndiye anofanira kuva. Kana akazoita zvakaipa, ndichaita Musandiranga nokusafara neshamhu, zvokuti vanhu kazhinji, uye nokurohwa kwavana vavanhu.
Pisarema 2: 7 ndichaparidza Chisarudzo raShe. Akati kwandiri: "Ndiwe Mwanakomana wangu, nhasi ini ndakubereka."
Mapisarema 89: 27 Iye achadana kwandiri, achiti, Ndimi baba vangu, Mwari wangu ruponeso "!
Mark 1: 1. Ndiwo mavambo aJesu Kristu, Mwanakomana waMwari, Evhangeri.
Luke 1:35. Kana Mutumwa akapindura akati kwaari: Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, uye Wokumusoro-soro richakufukidza; saka, uyewo Mutsvene iyo achazvarwa iwe unonzi Mwanakomana waMwari.
VaEfeso 4:13. kusvikira tose tasvika kubatana mukutenda uye nokuziva Mwanakomana waMwari, kuti munhu akakwana, uye kuti ukuru zvokunamata kuti wokukura kwakazara kwaKristu.
VaHebheru 4:14. Zvatiine mupristi mukuru akapfuura nomumatenga, Jesu Mwanakomana waMwari, ngatibatisise kupupura kwedu.
Jesu pachake anoti kuti ndiye mwanakomana waMwari
Mako 1:11. Uye inzwi rakabva kudenga richiti, Ndiwe Mwanakomana wangu unodikamwa, wandinofara naye kwazvo zvakafadza.
Mark 9: 7th Uye gore rakasvika rakavadzikatira, uye kubva gore rakasvika inzwi rakati: Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodika. Munzwei!
Allah haana mwanakomana
Asi muna Koran inoti pachena kuti Allah haana mwanakomana.
Allah haana akazviita mwanakomana, kana hakuna mumwe mwari kunze kwake; kuti nyaya zvingadai mwari mumwe vakagamuchira zvaakanga asika, uye vamwe zvechokwadi ungadai vakaedza kuwana nesimba pamusoro pevamwe. (Koran 23:29)
"Zvino vaJudha munoti," Ezra ndiye mwanakomana waMwari, "uye vaKristu achiti:" Kristu ndiye Mwanakomana waMwari. "Kune achiti nemiromo yavo, vanotevedzera sägelserna vaya kutenda pamberi. Kutuka kwaMwari ngakuve pamusoro pavo, sei vari kurasiswa kubva Chokwadi!" (Koran 9:30)
"Zvino vanoti (vaKristu uye vaJudha). Mwari ane mwanakomana akakudzwa kuva iye (pamusoro zvose kuti kufambidzana naye) No, kwaAri ndezvaiye chero ari kumatenga nezviri panyika, uye tinozvipira hedu vose. kuteerera (pakunamata) kwaari. " (Koran 2: 116)
"Kwete kuda (hwake) Mwari kuti aizoita awane mwanakomana akakudzwa (Ngaakudzwe iye kupfuura zvavakanga kufambidzana naye) Kana Iye zvakaziviswa chinhu, anoti chete.." Iva "-! Uye zviri . " (Koran 19:35)
Paizova Saka vanamwari maviri akasiyana. Mumwe wavo ane mwanakomana, mumwe kwete.
Mwari akatuma Mwanakomana wake munyika
The Bible rinoti kuti Mwari akatuma chete akaberekwa mwanakomana wake kuzoponesa nyika uye ayananise pamwe pachake.
Johani 3:16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani nani unotenda maari arege kuparara asi ave neupenyu hwusingaperi.
2 VaK 5:19. Nokuti Mwari akanga ari muna Kristu achiyananisa nyika kwaari, uye haana kuverenga zvivi zvavo navo, uye akaita kuti tive shoko rokuyananisa.
Korani Allah haana kutuma mwanakomana nyika nokuti haana mwanakomana.
Naizvozvo, hapana ruponeso Allah sezvo muri YHWH - Jehovha - nekuti hapana reconciler muna Koran.
Uyezve, neKorani mumwe Jesu pane zvinotaurwa neBhaibheri uye uchapupu. Ava zvachose vanhu vaviri vakasiyana. "Jesu" ari Koran anoenda zvachose pamusoro zvinotaurwa neBhaibheri nezvaJesu.
"Uye (rangarira) apo Jesu, mwanakomana waMaria, akati:" Oh Vana vaIsraeri! Ndiri mutumwa waMwari kwauri, kuti asimbise Torah (yakauya) pamberi pangu uye kukupa evhangeri nhume kunditevera, ane zita richava Ahmad. "Asi kana iye (Mohammad Ahmed) akauya kuna navo pachena uchapupu, vakati: "Uyu ndiwo zvawo mashiripiti" (Korani 61: 6)
Zvaizova zvakafanana Jesu, inova "Jesu" ari Koran zvachose anozvipesanisa. Kwete chete anopesana pachake, asi iye anoramba pachake.
Jesu ndiye Wokutanga noWokupedzisira
Up 1: 8. Ini ndini Arifa naOmega, kutanga nokuguma, ndizvo zvinotaura Ishe, uripo, wakange aripo, neuchazouya, Wemasimbaose.
Maererano neBhaibheri haisi Muhammad mutumwa waMwari, kana vatumwa, nokuti wamuka Jesu anoti ndiye mavambo nomugumo. Arufa naOmega ndiyo tsamba rechiGiriki arufabheti okutanga nookupedzisira. Nemamwe mashoko, Jesu ndiye wekutanga newekupedzisira. Hapana anouya pamberi paJesu uye hapana achauya pashure Jesu. Muhammad akasvika mazana emakore Jesu. Saka zvinoratidza kuti Muhammad ndiye muporofita wenhema.